UNurkovic uthi bazojabula babuye nganeno ngoba umsebenzi weChiefs awuphelile - Impempe
UNurkovic uthi bazojabula babuye nganeno ngoba umsebenzi weChiefs awuphelile
‘Bekuyiseyiwombe sokuqala, ngakho akumele siqale sijokole manje.’ Lokhu kushiwo nguSamir Nurkovic oshaye igoli leKaizer Chiefs ngesikhathi yenza obekungalundelwe ishaya iWydad Casablanca yaseMorocco.
IChiefs ishaye iWydad ngo 10 emdlalweni womlenze wokuqala womdlalo owandulela owamanqamu kwiCAF Champions League ngoMgqibelo ekuhambeni. Ukuwina kwiChiefs kuyibeka ebuhleni njengoba izodlalela ekhaya ngoMgqibelo (Juni 26). Idinga ukudlala ngokulingana kuphela ukuze idlulele kowamanqamu.
“Sidlale kahle ngokubambisana siyiqembu futhi ngijabulile ukuthi ngifake isandla ekuwineni kwethu. Kodwa ngeke sijabule kuze kweqe manje ngoba kuseyiwombe sokuqala.
“Ngempelasonto sidlala nabo ekhaya futhi kumele siqinisekise ukuthi siyawuwina lowo mdlalo,” kusho uNurkovic. Igoli elishaywe uNurkovic liqale laphikwa kuthiwa ulishaye esendaweni engamfanele, kodwa kwathi uma sekubhekwa kwiVAR lavunywa kwathiwa yilona impela.
I-VAR ifakwe njengoba sekuyimidlalo eyandulela owamanqamu kwiChampions League. “Yinto ebalulekile ukuthi kube neVAR ngoba kwehla ukubanjelwa kule ligi enkulu emhlabeni.
“Okumele sikwenze nje ukuthi siqhubeke nokulwa njengoba senza,” kusho uNurkovic. IChiefs kuzomele izibambe ziqini eFNB Stadium ngoMgqibelo ngoba iWydad iyiqembu eliyingozi kakhulu.
Nokho ingabambelela ekutheni ilishayile leli qembu ngo 1-0 emdlalweni wamaqoqo khona kule nkundla. “Konke okuthinta umlenze wesibili sizokushiyela kumqeqeshi ngoba sinomqeqeshi omuhle kakhulu.
“Angikhathazekile nakancane ngoba konke kuzohamba kahle,” kusho uNurkovic. IChiefs ingase izithole ibhekana ne-Al Ahly yase-Egypt uma iwina umlenze wesibili noma idlala ngokulingana.
I-Al Ahly nayo iwine ngo 1-0 emlenzeni wokuqala lapho ibibhekene khona ne-Esperance yaseTunisia ekuhambeni. Leli qembu elicijwa nguPitso Mosimane yilona elivikela isicoco seChampions League.
“Abadlali bajabule futhi kufanele lokho. Umphumela omuhle lona esiwuthole ekuhambeni. Kube ukudlala okuhle kuwo wonke umuntu okhona eqenjini. Kumele siqhubeke nokulwa,” kusonga uNurkovic.
Previous Previous post: Ngibakhumbuze umsebenzi wabo abadlali, kusho uMosimane we-Al Ahly
Next Next post: Kukhanyile kuVan Niekerk, kusemnyama kuSemenya